Isiri-yemakwikwi chikamu: chii chaunoda kuziva? - Law & More B.V.
Blog » Isiri-yemakwikwi chikamu: chii chaunoda kuziva?
Isiri-yemakwikwi chikamu: chii chaunoda kuziva?
Chikamu chisina kukwikwidza, chakatemerwa muhunyanzvi. 7: 653 yeDutch Civil Code, inorambidzwa kusvika parusununguko rusununguko rwesarudzo yemushandi iyo mushandirwi anogona kusanganisira muchibvumirano chebasa. Mushure mezvose, izvi zvinobvumidza mushandirwi kurambidza mushandi kupinda mukushandira imwe kambani, angave kana kwete muchikamu chimwe chete, kana kutotanga kambani yake mushure mekupera kwechibvumirano chebasa. Nenzira iyi, mushandirwi anoedza kuchengetedza zvido zvekambani uye kuchengetedza ruzivo uye ruzivo mukati mekambani, kuti zvisakwanise kushandiswa mune imwe nzvimbo yebasa kana semunhu anozvishandira. Chikamu chakadai chinogona kuva nemhedzisiro inosvika kure kumushandi. Wakatisaina kontrakiti yebasa ine chikamu chisiri chemakwikwi? Muchiitiko ichocho, izvi hazvingoreve kuti mushandirwi anogona kukubata kune ichi chirevo. Iyo paramende yakagadzira huwandu hwenzvimbo dzekutanga uye nzira dzekubuda kudzivirira zvinogona kuitika kushungurudzwa uye kusarongeka mhedzisiro. Mune ino blog tinokurukura zvaunofanira kuziva nezve isiri-kukwikwidza chidimbu.
Pakutanga, zvakakosha kuti uzive kana mushandirwi anogona kusanganisira chisina kukwikwidza chidimbu uye nekudaro pazvinoshanda. Chikamu chisina kukwikwidza chinoshanda chete kana chakabvumiranwa mukunyora with an munhu akura mushandi akapinda muchibvumirano chebasa che nguva isingaperi (kunze kwakachengetedzwa).
Iwo musimboti wekutanga ndeyekuti hapana isiri yemakwikwi chidimbu inogona kuverengerwa muzvibvumirano zvenguva pfupi. Chete muzviitiko zvakasarudzika kana paine zvinomanikidza zvebhizinesi izvo zvinoshandisirwa nemushandirwi, chikamu chisina kukwikwidza chinotenderwa muzvibvumirano zvebasa kwenguva chaiyo. Pasina kurudziro, chikamu chisina kukwikwidza hachina maturo uye kana mushandi achifunga kuti kurudziro haina kukwana, izvi zvinogona kuendeswa kudare. Zvinokurudzira zvinofanirwa kupihwa kana chibvumirano chebasa chapera uye chingasazopihwa mushure.
Uye zvakare, iyo isiri yemakwikwi chikamu chinofanirwa kuve, zvichibva pane hunyanzvi. 7: 653 BW ndima 1 sub b, mukunyora (kana neemail). Pfungwa iri shure kweiyi ndeyekuti mushandi anobva anzwisisa mhedzisiro uye kukosha uye akanyatso tarisa chirevo. Kunyangwe kana gwaro rakasainwa (semuenzaniso chibvumirano chebasa) richinongedzera kuchirongwa chakabatanidzwa chemamiriro ekushandira icho chikamu chacho chiri chikamu, chinodiwa chakazadziswa, kunyangwe kana mushandi asina kusaina chirongwa ichi zvakasiyana. Chikamu chisina kukwikwidza chakasanganisirwa muchibvumirano chevashandi chevashandi kana mune zvakajairwa mamiriro uye mamiriro hazvibvumirwe zviri pamutemo kunze kwekunge zivo nekutenderwa zvingafungidzwe nenzira ichangobva kutaurwa.
Kunyangwe vechidiki kubva pamakore gumi nematanhatu vachipinda muchibvumirano chebasa, mushandi anofanira kunge aine makore gumi nemasere kuti apinde muchibvumirano chisiri chemakwikwi.
Makwikwi chikamu chemukati
Kunyangwe hazvo chikamu chega chega chisina makwikwi chakasiyana zvichienderana nechikamu, zvido zvinobatanidzwa uye mushandirwi, pane akati wandei mapoinzi anowanikwa mune akawanda asiri makwikwi.
Nguva yacho. Izvo zvinowanzo taurwa muchikamu kuti mangani makore mushure memakambani emakwikwi emabasa anorambidzwa, izvi zvinowanzoitika kusvika kune 1 kusvika kumakore maviri. Kana iyo isinganzwisisike nguva muganho yakaiswa, izvi zvinogona kuyerwa nemutongi.
Chii chinorambidzwa. Anoshandira anogona kusarudza kuramba mushandi kushandira vese vanokwikwidza, asi anogona kutumidzawo vamwe vakwikwidzi kana kuratidza nharaunda kana nzvimbo iyo mushandi angaite basa rakafanana. Kazhinji zvinotsanangurwawo kuti mhando yebasa iri chii isingagone kuitwa.
Mhedzisiro yekutyora chirevo. Icho chidimbu kazhinji chine zvakare mhedzisiro yekutyora iyo isiri yemakwikwi chikamu. Izvi zvinowanzo sanganisira faindi yeimwe huwandu. Muzviitiko zvakawanda, chirango chinoiswawo pasi: chitsama chinofanirwa kubhadharwa zuva rega rega iro mushandi anotyora mutemo.
Mutongi akateedzera kune hunyanzvi. 7: 653 yeDutch Civil Code, ndima 3, mukana wekubvisa chirevo chisina kukwikwidza chakazara kana chikamu kana zvichisanganisira kusanzwisisika kusingaite kune mushandi izvo zvisingaenzaniswi nezvido zvemushandirwi zvinodzivirirwa. Nguva, nzvimbo, mamiriro uye huwandu hwefaindi hunogona kuongororwa nemutongi. Izvi zvinosanganisira kuyera zvido nemutongi, izvo zvinozosiyana pamamiriro ezvinhu.
Mamiriro ezvinhu ane chekuita neiyo zvido zvemushandi izvo zvinoita basa ndizvo musika wevashandi zvinhu sekuderera kwemikana pamusika wevashandi, asi mamiriro ako ega anogona zvakare kutariswa.
Mamiriro ezvinhu ane chekuita neiyo zvido zvemushandirwi iyo inoita chinzvimbo ihwo hunyanzvi hwakakosha uye hunhu hwemushandi uye kukosha kwemukati webhizimusi kuyerera. Mukuita, kwekupedzisira kunouya kumubvunzo wekuti kuyerera kwebhizimusi rekambani kuchakanganiswa here, uye zvinosimbiswa kuti chirevo chisina kukwikwidza hachina kuitirwa kuchengetedza vashandi mukati mekambani. 'Icho chokwadi chekuti mushandi awana ruzivo uye ruzivo mukuita chinzvimbo chake hazvireve kuti mashandiro ebhizinesi emushandirwi akakanganiswa kana mushandi iyeye aenda, kana iye mushandi paakaenda kumukwikwidzi. . ' (Hof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019, ECLI: NL: GHARL: 2019: 7739) Bhizinesi rekuyerera mwero rinokanganiswa kana mushandi achiziva ruzivo rwakakosha rwekutengesa nehunyanzvi kana akasiyana maitiro nemaitiro uye anogona kushandisa izvi ruzivo rwekubatsira iye waanoshandira nyowani, kana, semuenzaniso, kana iye mushandi ave nehukama hwakanaka uye hwakasimba nevatengi zvekuti vanogona kuchinjira kwaari nekudaro mukwikwidzi.
Iyo nguva yechibvumirano, iyo yakatanga kumisikidza, uye chinzvimbo chemushandi pamwe newaimbova mushandirwi zvinotarisirwawo apo dare rinotarisa huchokwadi hwechikamu chisina kukwikwidza.
Zvakakomba zvine mhosva zviito
Icho chisina kukwikwidza chidimbu, zvichienderana nehunyanzvi. 7: 653 yeDutch Civil Code, ndima 4, haina kumira kana kugumiswa kwechibvumirano chebasa kwakakonzerwa nezviito zvakakomba kana kusiiwa kune mushandirwi, izvi hazvingadaro. Semuenzaniso, zviito zvakakura zvine mhosva kana kusiiwa zviripo kana mushandirwi aine mhosva yerusarura, hazvi zadzikise zvisungo zvekudzoreredza kana murwere achinge arwara kana kuti akabhadharwa nenzira isingakodzeri kumamiriro ekushanda akachengeteka uye ane hutano.
Chirevo cheBrabant / Van Uffelen
Zvave kuoneka kubva pamutongo weBrabant / Uffelen kuti kana paine shanduko huru muhukama hwevashandi, chikamu chisina kukwikwidza chinofanira kusainwa zvakare kana chikamu chisina makwikwi chikava chinorema semhedzisiro. Aya anotevera mamiriro anoonekwa kana uchishandisa iyo Brabant / Van Uffelen muyero:
semhedzisiro yeiyo isiri yemakwikwi chikamu chakave chinorema
Iyo 'yakanyanya shanduko' inofanirwa kuturikirwa zvakazara uye haifanirwe saka kunetsekana chete neshanduko mukuita. Nekudaro, mukuita maitiro echina kazhinji haasati asangana. Izvi ndizvo zvakaitika, semuenzaniso, mune iyo nyaya isiri yemakwikwi yaiti mushandi aisatenderwa kushandira mukwikwidzi (ECLI: NL: GHARN: 2012: BX0494). Sezvo mushandi anga afambira mberi kubva kumakanika kuenda kumutengesi mushandi panguva yaaishandira kambani, chirevo ichi chakatadzisa mushandi zvakanyanya nekuda kwekuchinja kwebasa kupfuura panguva yekusaina. Mushure mezvose, iyo mikana pamusika wevashandi yaive zvino yakakura zvikuru kune mushandi kupfuura pakutanga samakanika.
Izvo zvakakosha kuti uzive pano kuti mune dzakawanda zviitiko chirevo chisina kukwikwidza chakangobviswa zvishoma, zvinoti kusvikira zvave kuremedza zvakanyanya nekuda kweshanduko yebasa.
Chikamu chisina-kukumbira chakaparadzaniswa nechikamu chisina kukwikwidza, asi chakada kufanana nacho. Panyaya yechikamu chisina kukumbira, mushandi haarambidzwe kuenda kunoshandira mukwikwidzi mushure mekushanda, asi kubva mukuonana nevatengi nehukama hwekambani. Izvi zvinodzivirira, semuenzaniso, mushandi kubva kumhanya nevatengi vaakakwanisa kuvaka navo hukama panguva yebasa rake kana kubata vanopa rubatsiro pavanotanga bhizinesi rake. Mamiriro ezvinhu emakwikwi emakesi akurukurwa pamusoro anoshanda zvakare kune isiri-yekukumbira chikamu. Chikamu chisina-kukumbira chinoshanda chete kana chakatenderanwa mukunyora with an munhu akura mushandi akapinda muchibvumirano chebasa che nguva isingaperi yenguva.
Wakatisaina chisina kukwikwidza chidimbu uye unoda here kana uine basa nyowani? Ndapota taura Law & More. Magweta edu nyanzvi mumutemo wezvemabasa uye vanofara kukubatsira.
Previous Post Iyo Bankruptcy Act nemaitiro ayo
Next Post Shanduko muripo wechibvumirano chebasa: chinoshanda sei?